मदन जयन्तीमा एमाले नेताहरूले दिएको सन्देशः अब हामी एक हुन सक्दैनौँ ! – Classic Khabar
June 29, 2021 98
आज ७०औँ मदन जन्म जयन्ती । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीको ७०औँ जन्म जयन्ती । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बिहानै विज्ञप्ति जारी गरे । मदन जयन्तीको अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा उनीप्रति श्रद्धाञ्जली लिने कुरा त औपचारिक नै भइहाल्यो । विज्ञप्तिमा उनले जनताको बहुदलीय व्यवस्थाका प्रतिपादकका रुपमासमेत भण्डारीलाई सम्झिएका छन् । यो त भयो औपचारिकताको कुरा ।
एमाले नै विभाजनको डिलमा पुगेका बेला नेता नेपालले सिङ्गो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्न नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरे । राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने र लोकतन्त्रविरुद्ध तथा संविधानमाथि मर्मान्तक प्रहार गर्ने दिशाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम र नेतृत्वमा हुनु वर्तमानको तितो यथार्थ र दुःखद अवस्था भएको उल्लेख गरेका छन् । सुरुमा उनकै भनाइ हेरौँ ।
‘शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको जनविश्वासको जगमा देशको संविधान, पार्टी विधान, विधि र सिद्धान्त अनुरूप पार्टी एवम् सरकार सञ्चालन नगरी राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने र लोकतन्त्रविरुद्ध दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गर्दै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू नष्ट गर्ने तथा संविधान माथि मर्मान्तक प्रहार गर्ने दिशाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम र नेतृत्वमा हुनु वर्तमानको तितो यथार्थ एवम् हामी सबैका लागि दुखद् अवस्था हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अतः विद्यमान वैचारिक–राजनैतिक–सांस्कृतिक–आर्थिक विचलन, विकृति, विसङ्गति, साङ्गठनिक बेथिति र अन्यायको अन्त्य गर्दै नेकपा (एमाले), सिङ्गो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्न सम्पूर्ण पार्टी नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा आम जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछु ।’
स्वयं एमाले नै एक रहन नसकेको अवस्थामा उनले नेता नेपालले गरेको सिङ्गो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा कोको सामेल हुने हो ? स्वयं एमाले नेता नै कन्फ्युजनमा छन् । नेपालको विज्ञप्तिप्रति लक्षित गर्दै एमाले नेता गोकुल बास्कोटा पनि खुब कन्फ्यूज भएछन् । उनकै शब्दमा जननेताप्रति श्रद्धाञ्जली लिन एक शब्द मात्रै खर्चेका बास्कोटाले धेरै शब्द नेता नेपालका नाममा खर्चिएका छन् ।
उनले माधव नेपाललाई व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न पनि सोधेका छन् । माधव नेपालको नामै नलिई उनले आफ्नो कन्फ्युजन व्यक्त गरेका छन् । एमालेलाई धुजा धुजा पारेको आरोपसमेत लगाएका बास्कोटाले एमाले एकता गर्ने हो कि कलम पार्टी बनाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘जननेता मदनको जन्म जयन्तीमा जारी एक नेताको अपिल पढेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ शिराबाट एकीकृत गर्न आह्वान गरेको रहेछ । कुरा राम्रै हो । तर सग्लो पार्टी धुजा धुजा पार्न बुर्कुसी मार्नेले एमाले एकताबद्ध पार्ने भनेको हो कि कलम पार्टी बनाउने भनेको हो? कन्फ्युज्ड भइयो । जननेताप्रति श्रद्धाञ्जली !’
प्रायः सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले पनि भण्डारीलाई श्रद्धाञ्जली दिन केही शब्द खर्च गरेका छन् । उनले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले विपक्षीका नाममा पनि केही शब्द खर्चिएका छन् । उनको कुरा हेरौँ, ‘आज जननेता मदन भण्डारीको सत्तरिऔँ जन्म जयन्ती । जन्म जयन्तीको अवसरमा जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक जननेता मदन भण्डारीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन । जबजको मार्गदर्शनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गरौँ, बहुदलीयता र पार्टी पद्धतिविरुद्धको षडयन्त्रलाई असफल बनाऔँ ।’
मदन जन्मोत्सवमै ओलीले घण्टौँ ‘प्रवचन’ । भएभरका विषय उठाए । मदनको योगदान र चर्चाबाट सुरु भएको ओलीको भाषण विपक्षीको खोइरो खन्नेदेखि सरकारका कामको प्रशंसा गर्नेसम्म पुग्यो । अदालतदेखि व्यक्तिसम्मका विषयमा उनले टिप्पणी गरे । त्यतातिर नआऔँ ।
शेरबहादुरको कार्यकर्ता, प्रचण्डको पुच्छर – ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा एमाले एकताभन्दा इतर समूहका नेता माधव नेपालमाथि फेरि खनिए । सुरुमा नेता नेपालको एउटा भनाइको खण्डन गरे । जुन नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको नेता नेपालको दाबीलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरे । नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नका लागि आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेको टिप्पणी गरे ।
‘माधव नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ताका हुन् । अहिले धक के लगाएर हिँडेका छन्, ‘केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ! नेपालमा कोही नभेट्टाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला ।’
ओलीले नेता नेपाललाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुच्छर भएको टिप्पणी गरे । उनी शेरबहादुर देउवाको पार्टी नै ज्वाइन गर्न पनि सक्छन् । कार्यकर्ता भएर हिँडेका छन्,’ ओलीले भने, ‘प्रचण्डको पार्टीमा जानु त छँदै छ । त्यो त उनको गन्तव्य हो । मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुन् । ‘यिनी एकढंगले भन्ने हो भने प्रचण्डको पुच्छर हुन् । जन्तु पूर्वतिर फर्कियो भने पुच्छर पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्कियो भने त्यो (पुच्छर) पूर्वतिर हुन्छ । पछाडि पछाडिसँगै हुन्छ । उनी यता जाऊँ भने भने पछि पछि त्यतै लाग्छ । काँग्रेसतिर जाऊँ भनेपछि त्यतै पछि पछि लाग्छ ।’
एमाले मिलाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बेला सोमबार एमाले जनका बोली सुन्दा लाग्छ अब एमाले मिल्ने कुनै सम्भावना छैन । एमाले एकीकृत राख्न १६ गते ओलीले महाधिवेशन आयोजक समिटको बैठक बोलाएका छन् । तर, त्यो पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुने हो कि भन्ने आङ्कलन नेताहरूका बोलीबाट गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा एमाले एकता अब भाषण र आदर्शमा मात्रै बाँकी रहेजस्तो यी अभिव्यक्तले भान हुन्छ । ओलीको अन्तिम प्रयास सके जति नेपाल समूहका नेताहरूलाई तान्ने प्रयास मात्रै हो । नेपाल समूहका केही नेता जसलाई ओली पुनः एमालेमा फर्काउनै चाहँदैनन् र उनीहरू जान पनि चाहँदैनन् ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार १५ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextस्वस्तिमा खड्काले किनिन् नयाँ कार, कडा परिश्रम गरेर किनेको भन्दै मख्ख !